Xilliga 3-aad ee isjiidka - Dhaqanka Pop
Gaarka ah: Daawo Xiliga Qaangaarka ah ee 3-aad
Fiidiyowga ka fog Freeform
Ardayda Cal U waxay dib ugu laabanayaan kulliyadda. The koray Xilliga 3-aad ee bartamihii xilli-ciyaareedkii waa halkaan, Zoey Johnson (Yara Shahidi) waxay ku nooshahay riyooyinkeedii moodada. Ka dib markii ay ka tagtay iskuulkii bartamihii xilli-ciyaareedkii si ay u sii wadato xirfadeeda sida stylist stylist, Zoey hadda waa Joey Bada $$ s stylist waqti-buuxa ah waxayna la shaqeyneysaa ilaalintiisa Indigo, oo uu ciyaaray Saweetie. Taxanaha ayaa soo laabanaya si uu u dhammaystiro xilli ciyaareedkiisii ​​saddexaad Khamiista, Janaayo 21, 2021.
Taageerayaashu waxay arkeen wax yar oo ku saabsan rafiiqa ku -simaha ugu horreeya usbuucii hore. Daawadayaasha ayaa sidoo kale loo soo bandhigay caqabadaha cusub ee Zoey ku wajahan xirfadeeda iyada oo xiriir la yeelanaysa macmiilkeeda cusub ee dalbanaya. Saweetie waxay ku ifinaysaa doorkeeda martida waxayna runtii tuseysaa Zoey sida loo noqdo stylist xitaa ka wanaagsan iyada oo loo marayo tijaabooyin taxane ah oo adag.
Sawirka adoo adeegsanaya Freeform
halkee baan ka iibsan karaa fondant for cake
Ku soo noqoshada dugsiga, saaxiibbadeed waxay la tacaalayaan dhammaadka xiriirrada iyo bilowga kuwa cusub, maadaama ay maareynayaan mas'uuliyadaha - iyo cawaaqibka - la yimaada noqoshada ardayda kulliyadda. Qeybta gaarka ah ee kor ku xusan waxay muujineysaa isla waqtiga dhaqdhaqaaqa Aarons uu ku xirayo gacmo -gacmeed, Nomi (Emily Arlook) oo la tacaali doonta waaqica iyo dhibka ah in hooyo hooyo noqoto. In kasta oo Jazz (Chloe Bailey) ay isku aragto inay tahay inay barato sida loogu oggolaado Doug (Diggy Simmons) inay tagaan inta ay ku jiraan 'nasasho'.
Si loogu dabaaldego soo noqoshada majaajillada Freeform, shabakaddu waxay siineysaa bandhigyada daawadeyaasha casriga ah fursad ay ku guuleystaan ​​xoogaa lacag caddaan ah iyagoo naqshadaynaya qaar ka mid ah fiirinta kabka iyada oo loo marayo Style-ka weyn & amp; Tartanka naqshadeynta. Naqshadayaasha da'da yar iyo stylists waxay awoodi doonaan inay abuuraan sida ugu fiican koray muuqaalo dhiirigelin leh, oo kuwa ku guuleysta waxay heli doonaan abaalmarin weyn oo ah $ 10,000, oo lagu daray fursadda qaabaynta ama naqshadeynta labbiska laba xubnood oo ka mid ah sawir qaadista. Freeform waxay marti gelin doontaa sawir qaadista naqshadeeyayaasha soo baxaya. Qofka ku guuleysta wuxuu heli doonaa $ 5,000.
Taageerayaashu waa inay soo gudbiyaan nashqad ay ugu jecel yihiin dabeecadda lab iyo dheddig ee bandhigga, iyo soo gudbinta waxaa ku jiri kara sawirro, sawirro, mannequins qaabaysan, ama naqshado dhar la sameeyay oo asal ah. Soo gudbinta waxaa lagu qiimeyn doonaa Asalka, koray Sawir, iyo Soo Bandhigid. Yara Shahidi, Trevor Jackson, iyo Emmy oo loo magacaabay naqshadeeyaha dharka Michelle Cole ayaa dooran doona guuleystaha. Tartanka wuxuu bilaabmayaa Janaayo 11 wuxuuna dhamaan doonaa Febraayo 4. Si aad uga qaybgasho, booqo Freeform.com/grownishcontest .
Daawo koray Xilliga 3-jiidka bartamihii xilli-sare; koray soo laabto Khamiista, Janaayo 21 markay tahay 8 fiidnimo ET/PT oo ku yaal Freeform.
intee in le'eg ayay shukulaatada qaadataa si loo dejiyo
sida loo sameeyo keega fondant bilowga ah
rooxaanta ku jirta qolofka casaanka ah johansson
iga kaash bannaanka yaa tahay